कार कसरी जोगाउने ? प्रयोगकर्तालाई १३ टिप्स:: Sanchar Garage
नेपालमा गाडीको मूल्य सस्तो छैन । आफ्नै गाडी किन्ने कुरा घर जग्गा जोड्नु सरह नै हो । तर, नेपालका सडकको अवस्था धेरै दयनीय छ । यसले ब्यक्तिको ठूलो सम्पत्तिको रुपमा रहने गाडीलाई संरक्षण गर्न चुनौति थपेको छ । झन् कतिपय प्रयोगकर्ताले गाडीको उपयोग सहीसँग गर्दैनन्, कतिपयले जान्दैनन् पनि ।
त्यसैले धेरैले लाखौं खर्च गरेर किनेको नयाँ गाडी एक-दुई वर्ष नपुग्दै पनि पुरानो जत्तिकै बनाउँछन् । दैनिक पानीले पखालेपछि र देख्दा सफा भएपछि कारको शान देखिहाल्छ भन्ने मान्यता मौलाएको छ ।
तर, उचित मर्मतसम्भार नहुँदा गाडी चाँडो-चाँडो र पटक-पटक बिग्रने र खर्च पनि बढ्दै जाने हुन्छ । यस्ता समस्या आउन नदिन कारलाई कसरी स्याहार गर्ने त ?
यस विषयमा हामीले हुण्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर (सर्भिस) दीपक थपलियासँग कुराकानी गरेका छौं ।
थपलियाले कारको स्याहारमा उपभोक्ताले ध्यान दिनुपर्ने पक्षमा १३ वटा टिप्स प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यसैले यसलाई चलाउँदा होस् वा नचलाउँदा यसको उचित संरक्षणको योजना तयार राख्नुस् र त्यसैअनुसार केयर गर्नुस् ।
यो नबिर्सिनुस् कि यो मेकानिकल साधन हो, यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्दा तपाईंको यात्रा पनि सुरक्षित रहन्छ । त्यसैले गाडीलाई दिनुपर्ने माया र स्याहारमा कमी हुन नदिनुस् ।
सफा मात्र हैन, ‘स्वस्थ’ पनि राख्नुस्
काठमाडौंको बाटो अवस्था निकै खराब छ । हिलो र धुलो यहाँका लागि सामान्य जस्तो बनेको छ । नबिर्सनुस् कि गाडी भनेको हावा र तेलको मिक्सचरले चल्ने साधन हो । त्यसैले एयर इन्टेक कस्तो अवस्थामा छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले सास लिएकोजस्तै गाडीले पनि लिएको हुन्छ ।
त्यसैले तपाईंले ड्राइभ गरेको ठाउँको इन्भायरोमेन्ट कस्तो छ ? प्रदुषित वातावरणमा उसले पनि त्यही प्रदुषित हावा लिन्छ । त्यसैले खराब कन्डिसनमा ड्राइभ गरिएको छ भने त्यसै अनुसार केयर गर्नुपर्छ । गाडीको एयरफिल्टरलाई क्लीन राख्नुपर्छ ।
बाहिरको हिलो धुलो पनि अर्को पाटो हो । हिलो धुलोले गाडीलाई फोहोर त देखाउँछ नै । सँगै त्यसले पर्फमेन्समा पनि फरक पार्छ । गाडीलाई सफा र चिटिक्क राख्न त सबैले प्रयास गरेका हुन्छन् । तर, चक्कामा धेरै हिलो भयो भने माइलेज कम दिने समस्या हुन्छ ।
त्यसले वेट बढाउँछ । ग्रीपमा समस्या पर्छ । आकर्षण फितलो हुन्छ । एयर इन्टेक कस्तो छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यो नियमित मर्मतसम्भार भन्दा फरक पाटो हो । किनभने प्रदुषित वातावरणमा यस्ता समस्या कम हुन्छन् ।
तर, हाम्रो बाटो र वातावरणको कन्डिसनले यि कुरामा विशेष ख्याल राख्न जरुरी बनाएको छ । यो पक्षलाई हेर्ने कुरा त्यस ठाउँको वातावरणसँग निर्भर हुन्छ ।
सँगै बाहिर खुला रुपमा बेचिएका मिसावटयुक्त तेल नहाल्दा राम्रो हुन्छ । त्यसले इञ्जिनलाई खराब गर्न सक्छ । त्यसैले आवरणमा मात्रै होइन, गाडीको मेसिनरी पार्टपूर्जासम्मलाई क्लीन राख्नुस्, हेल्दी राख्नुस्, अर्थात गाडीलाई सफासँगै स्वस्थ राख्नुस् ।
पखाल्ने पानीमा आइरन छ कि ? ख्याल गर्नुस्
केही मान्छेहरु आफ्नो गाडीलाई राम्रो देखाउन दैनिक गाडी ‘वास’ गरिरहनुहुन्छ । तर, अहिले काठमाडौंको पानी हेर्नुभयो भने यसमा निकै ‘आइरन रिच’ छ । वैज्ञानिक हिसावमा भन्दा यस्तो पानी गाडी धुनयोग्य मानिदैँन ।
जस्तो कि तपाईंको सेतो गाडी छ, अब दिनदिनै त्यस्तो पानीले पखाल्नुस्, त्यो केही समयमै गाडी पहँेलो जस्तो भएर जान्छ । सफा गर्न प्रयोग गरेको पानीले तपाईंको गाडी झनै बिगार्ने खतरा हुन्छ । गाडीमा मेटालिक कलरहरु प्रयोग हुन्छ । त्यसैले पनि यस्ता पानीबाट गाडीलाई टाढा राखेकै बेस हुन्छ ।
यो समस्या समाधानका लागि धेरै वासिङ सेन्टरहरुले एन्टी आइरन भएको र टि्रटमेन्ट वाटर प्रयोग गर्छन् ।
अब यसको मतलव घरमा गाडी सफा गर्नुहुँदैन भन्ने पनि होइन । दैनिक गाडी सफा गर्नुहुन्छ भने, आफ्नो घरको पानी कस्तो छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर मात्रै कार सफा गर्नुपर्छ ।
त्यसैले आफ्नो घरको पानीको अवस्था कस्तो छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ । ट्रिटमेन्ट वाटर प्रयोग गर्दा समस्या हुँदैन । कार सफा गर्दा खस्रो कपडाको प्रयोग नगर्नुस् ।
सर्भिसिङबारे अपडेट रहनुस्
अहिले सर्भिसिङबारे गाडी आफैंले सूचना दिन्छ । धेरै गाडीमा त्यस्ता प्रविधि आइसके । ड्यासबोर्डमा नै सर्भिसबारेका सबै सूचना दिने फिचर्सहरु राख्न थालिसकियो । अब कन्जुमर पनि त्यो प्रविधिबारे अपडेट रहनुपर्छ ।
अहिले धेरै गाडी मेन्टिनेन्स-पि्र नै बनाइएको हुन्छ । ब्याट्रीमा आजभोलि पानी हाल्नुपर्ने झन्झट छैन । तर, आफ्नो ब्याट्रीको लाइफ साइकल कति हो भन्ने कुरा चाँही थाहा पाइराख्नुपर्छ । त्यसैगरी क्लष्टरमा गाडीको अवस्थाबारे सूचना दिने सबै इन्फरमेसन हुन्छ ।
क्लष्टरले देखाउँछ कि चेक लाइट बल्यो कि बलेन, सर्भिसमा जाने बेला भयो कि भएन ? अहिले त सर्भिसिङ सेड्युल पनि राख्न मिल्ने र रिमाइन्डर सेट हुने गाडी पनि छन् । क्लष्टर पढेर तपाईंले थाहा चाहीँ पाउनुपर्‍यो । कुनै बत्ति बल्यो भने यसले के संकेत गर्दैछ भनेर जानकारी पनि राख्नुपर्‍यो । सूचना आएपछि हेलचक्र्याइँ नगरी सर्भिस सेन्टर जानुपर्छ ।
यदि यस्ता इन्फरमेशन नआउने गाडी हुन् भने आफैं यसबारे अपडेट रहनुपर्‍यो । सर्भिसिङ समस्या आएपछि गरौंला भन्ने सोच राख्नु गलत हो । किनभने तपाईं मोटर हाँक्दै हुनुहुन्छ ।
यसको स्याहारको कुरा तपाईंको मात्रै होइन, अन्यको जीवनसँग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले नियमित मर्मतको लागि तयार रहने बानीले तपाईंसँग अरुलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
असामान्य आवाज र गन्धलाई पनि ख्याल गर्नुस्
गाडी मेकानिकल साधन हो । यसका पार्टपूर्जाहरु जतिबेला पनि फेल हुन सक्छन् । त्यसैले कार चढ्ने र चलाउनेले यसबारे महत्वूर्ण ‘थ्री सेन्स’ राख्नुपर्छ ।
पहिलो ‘भिजिबल’ कुरा भयो । गाडीमा केही प्रोबलम भिजिबल अर्थात मज्जाले देखिने खालका हुन्छन् । टुटेको, फुटेको, चर्केको, बिग्रेको कति चिज आँखाले नै देख्छ ।
अर्को पक्ष भने ‘अडिबल’ अर्थात सुनेर महसुस मात्रै गर्न सकिन्छ । कार चलाउँदा कुनै अनयुजल या अस्वाभाविक आवाज आइरहेको हुन सक्छ । त्यसलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्‍यो ।
सामान्य अवस्थामा असामान्य र अस्वाभाविक आवाज आउँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । कुनै पार्टपूर्जा प्रयोग गर्दा ‘अनयुजल’ महसुुस भयो भने पनि त्यसमा ध्यान दिनै पर्‍यो ।
तेस्रो पक्ष चाँही ‘स्मेल’ अर्थात गन्ध हो । तपाईंको गाडीमा असामान्य स्मेल आयो भने पनि तपाईं सर्भिस सेन्टर जानैपर्छ । किनभने त्यसले गाडीमा खराबीको संकेत गरेको हुन्छ ।
त्यसैले कुनै अप्ठेरो अवस्था आउनु अघि नै ‘थ्री सेन्स’ राखेर गाडीको केयर गर्नुपर्छ । यस्ता पाटोमा ख्याल गरियो भने बाटोमा गाडी बिगि्रएर दुःख पाइरहनुपर्दैन । यस्ता असामान्य अवस्थामा गाडीको सर्भिसिङ गराइहाल्नुपर्छ ।
चर्को घाममा लामो समय पार्क नगर्नुस्
गाडी पार्क गर्दा पनि निकै ख्याल गर्नुपर्छ । कार पार्किङको पनि आफ्नो गाइडलाइन हुन्छ । तपाईंले गाडी दिउँसो खुला ठाउँमा चर्को घाम पर्ने गरी राख्नु भएको छ भने त्यसलाई असर पर्छ ।
धेरैले आजभोलि गाडीमा पर्फ्युम राखेका हुन्छन् । पर्फ्युम त ग्यास हो, अल्कोहल हो । त्यो त धेरै घामको एक्सपोजरमा फुट्न सक्छ । त्यसो भएमा ड्यासबोर्ड बिग्रन्छ । यस्तो कुरामा ख्याल नगर्दा कतिपय गाडीमा आगलागी पनि भएका छन् ।
एकपटक एकजनाले गाडीको ग्लोब बक्समा ‘बडी स्प्रे’ राख्नुभएको रहेछ, लामो समय घाममा पार्किङ गर्दा त्यो पडि्कएर सिसा नै फुट्यो । यस्तो ‘डियोड्रेन्ट’मा त अल्कोहलको मात्रा धेरै हुन्छ त्यसले गाडीमा आगो लाग्ने खतरा पनि हुन्छ ।
त्यस्तै गाडीभित्र सेन्ट, रक्सी, पेट्रोल लगायत प्रज्वलनशील पदार्थ नराखेकै जाति हुन्छ । त्यो नभए पनि पार्किङ गर्दा सकेसम्म घाम छलाउनु उत्तम हो । घाममा राख्ने नै हो भने गाडीको लागि सनलाइट प्रोटेक्टर पनि पाइन्छ । त्यो प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
सँगै धेरैले गाडीको बोटल होल्डरमा पानी राख्ने प्रचलन हुन्छ । त्यो पनि राम्रो होइन । एक त वाटर बोटल नै प्लास्टिकको हुन्छ, त्यसमाथि ड्यासबोर्डदेखि ट्रिभहरु प्लास्टिकको हुन्छ । त्यसको रेडियसन पनि पानीमा सिधा पर्छ । त्यसैले पानी बाफिएको हुन्छ ।
त्यस्तो पानी खानु कति उपयुक्त होला ? धेरैलाई पार्किङ यसरी गर्नुस् है भन्दा धेरै मैले जानेकै छु भन्ने हुन्छ । तर, पार्किङमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।
पानी पर्दा र कभर लगाउँदा ख्याल राख्नुस्
खुला स्थानमा पार्किङ गर्दा पानी पर्‍यो भने पनि गाडीमा असर पर्न सक्छ । अहिले वातावरण निकै पोलुटेड छ । कुनै अवस्थामा एसिड वर्षा भयो भने गाडीको बाहिरी भाग र कलरलाई प्रभाव पर्छ । भारतको मुम्बइमा त एसिड रेनको समस्या धेरै छ । यहाँको पनि वातावरण सधैं राम्रो अवस्थामा रहँदैन ।
सँगै गाडी पार्किङ गर्दा पानी बगेर जानसक्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ । पार्किङस्थलको ड्रेन सिस्टम गतिलो भएन भने ठूलो वर्षामा गाडीलाई खतरा हुन सक्छ । गाडी पानीमा डुब्ने वा बगाउने खतरा पनि हुन सक्छ ।
गाडी छोपेर राख्ने प्रचलन पनि छ । यो ठीकै पनि हो । तर, यसमा बेवास्ता गरियो भने त्यसले उल्टो बेफाइदा पनि हुन सक्छ । अहिलेको बडी कभरमा भित्रबाट सिल्भरको कोटिङ गरिएको हुन्छ । पानी रहनासाथ त्यसलाई निकालीहाल्नुपर्छ ।
किनभने पानी रहेपछि घाम लाग्यो भने त्यो सिल्भर कोटेड कलर गाडीको बडीमा टाँसिन्छ । त्यसैले पानी नसुक्दै गाडीबाट कभर हटाउनुपर्छ । घाम लाग्दा पनि गाडी छोप्ने कभर पाइन्छ । तर, सकेसम्म छायाँ पर्नेस्थानमा राख्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ ।
गाडीलाई घर नबनाउनुस्
गाडी बाहिरबाट हेर्दा मात्रै होइन, भित्र पनि सफा र चिटिक्क राख्नुपर्छ । तर, कतिपयले त गाडीलाई नै घर बनाएका हुन्छन् । कपडा, जुत्तादेखि आफूलाई आवश्यक पर्ने चिज गाडीभित्रै राख्नेहरु पनि धेरै छन् ।
आरोपित गर्न खोजिएको हैन, गाडी सफा राख्ने मामिलामा पुरुषभन्दा महिला प्रयोगकर्ताहरु कमजोर देखिएका छन् । प्रायः घर सफा नराख्ने पुरुष गाडीको सफाइको मामिलामा हामी सचेत देख्छौं ।
घरको सरसफाइमा अब्बल महिलाहरु गाडी सफाइमा भने किन कमजोर देखिन्छन् भन्ने अध्ययनकै विषय हुन सक्ला ।
धेरैले गाडीमा न्यापकिन राख्ने, तर प्रयोग पटक्कै नगर्ने प्रचलन छ । यस्ता साना विषयमा गाडीमा प्रयोगकर्ता सेचत हुनैपर्छ । गाडीको भित्री भागलाई गन्धरहित बनाउनुस् ।
गाडीलाई घर नबनाउनुस् । किनभने गाडीको सफाइ घरको भन्दा असहज हुन्छ । त्यसैले नियमित सफाइमा अल्छी नगर्नुस् ।
ग्राउण्ड क्लियरेन्स कति हो भन्ने नभुल्नुस्
आजभोलि गाडीलाई सकेसम्म कम तौलको बनाउन अनेकन प्रयासहरु गरिन्छन् । त्यसैले गाडीको अघिल्लो भागमा पार्टहरु प्लास्टिक र अल्मुनियमको राख्न थालिएको छ । यदि गाडी चलाउनेले आफ्नो गाडीको ग्राउण्ड क्लियरेन्स ख्याल गरेन भने ठोक्किएर त्यस्ता पार्टपूर्जाहरुमा क्षति पुग्छ ।
यो पक्षलाई निकै ध्यान दिनुपर्छ । कस्तो सडकमा आफ्नो सवारी जान सक्छ र त्यसलाई चलाउँदा कति केयर गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । त्यसैले सेन्स अफ ड्राइभिङमा तपाइर्ं निकै धैर्यवान हुनुपर्‍यो ।
अप्ठेरो बाटोमा किन सवारी दौडाउनुपर्‍यो ? तपाईंको गाडीलाई पनि आफूलाई जत्तिकै माया गरेर चलाउनुस्, त्यसले पनि तपाईंको ‘वेल केयर’ गर्छ ।
टाइमिङमा हेलचक्रयाँइ नगर्नुस्
तपाईंले गाडी चलाउनुहुन्छ भने गर्नुपर्ने काम समयमै गर्नुपर्छ । जस्तो कि समय-समयमा इञ्जिन आयल फेेर्नुपर्छ । तपाईंको इञ्जिन आयल कति समयमा फेर्नुपर्ने हो ? यसमा पटक्कै हेलचक्रयाइँ नगर्नुस् ।
तपाईंको इञ्जिन आयल ५ हजार किलोमिटर दौडिँदा फेर्नुपर्ने छ तर, तपाईंले बेवास्ता गर्नुभयो भने पछि तपाईंको इञ्जिनको बेरिङमा लोड पर्छ ।
त्यसले पिस्टनमा इफेक्ट पर्छ । त्यसले इञ्जिन सिज हुनेसम्मको खतरा हुन्छ । तपाईंले आफ्नो गाडीको पार्टको लाइफ साइकल कति हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसअनुसार समयमै त्यसलाई फेर्ने र मेन्टेन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
सस्तो स्पेयर्स नखोज्नुस्
बजारमा स्पेयर्स पार्टस् थरी-थरी मूल्यमा पाइन्छ । धेरैले सस्तो स्पेयर्स पार्टस् खोज्छन् पनि । तर, निकै अस्वभाविक मूल्यमा स्पेयर्स पार्टस् हाल्नुभयो भने पनि त्यसको कार्यक्षमता राम्रो हुँदैन । त्यसको ड्युरेबिलिटीमा पनि असर पर्छ ।
सस्तोमा पाएको चिजले अपेक्षा अनुरुप काम गर्दैन भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । सस्तोमा मात्रै लाग्दा समस्या पनि धेरै आउन सक्छन् । त्यसैले सकेसम्म गुणस्तरीय पाट््र्सहरु हाल्दा फाइदा हुन्छ ।
जस्तो एउटा स्यान्ट्रो कारको ब्रेक प्याड ८ सयदेखि ३५ सयसम्ममा पाइन्छ । राम्रो ब्रेकप्याड सेरामिक्सले बनेको हुन्छ । तर, बजारमा सेरामेटालिकबाट बनेका कमजोर ब्रेकप्याडसम्म पाइन्छन् ।
यसरी गाडीलाई आफ्नो सन्तान जत्तिकै स्याहार दिन सके त्यसले आफ्नो कार्यक्षमता पनि त्यसैअनुसार देखाउँछ ।
प्रस्तुतिः रबिन्द्र घिमिरे (अनलाइनखबर)
बाग्लुङको धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा चिसोका कारण विरामीको संख्या बढ्यो (हेर्नुहोस पुरा समाचार )
दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा सिटामोल किन्न ६ घण्टाको बाटो, डोको नै एम्बुलेन्स(हेर्नुहोस पुरा समाचार )
जाडोमा व्यायाम गर्दै हुनुहुन्छ ?ख्याल गर्नुहोस् फोक्सोको (हेर्नुहोस पुरा समाचार )